Vaovao - Na dia misy aza ny fitaoman'i Covid-19 Manerana An'izao Tontolo Izao, Ny ekipa Amulite dia mamita tetik'asa maro eran'izao tontolo izao miaraka amin'ny fiaraha-miasa sy ny fanohanan'ny mpanjifa!
Na dia misy ny fitaoman'i Covid-19 manerana an'izao tontolo izao aza, ny ekipa amulita dia mamita tetik'asa maro eran'izao tontolo izao miaraka amin'ny fiaraha-miasa sy ny fanohanan'ny mpanjifa!
Amin'ny taona 2020, ho an'ny orinasa maro, indrindra ny famokarana milina famokarana milina lehibe, noho ny Covid-19 sy ny akaiky ny sidina iraisampirenena dia nahatonga fanamby lehibe ho antsika; Noho ny fikatonan'ny sidina iraisam-pirenena, ny vondrona Amulite China dia tsy afaka nandefa ny ekipan'ny injenierantsika hametraka ny sasany amin'ireo laharam-pamokarana ho an'ireo mpanjifantsika vahiny, miaraka amina toerana matotra toy izany, ny ekipa amulita dia afaka mahatsapa fa miahiahy ny mpanjifanay hanohy ny asa fametrahana andiany; Miaraka amin'ny ekipa injeniera samihafa, manamboatra, ao anatin'ny fotoana fohy, ny ekipan'i Amulite dia nanao torolàlana momba ny fametrahana antsipirihany sy sary sy horonan-tsary hampianarana ny fametrahana ny mpanjifa vahiny mandroso amin'ny làlana an-tserasera; ny fametrahana torolàlana an-tserasera toy izany dia sambany ho an'ny mpanjifanay, fantatray fa tsy mora izany. Mandrosoa, Fa ny mpanjifanay rehetra dia nahavita azy tsara, Mankasitraka ny ezaka rehetra sy ny fanohanana avy amin'ny mpanjifa vahiny rehetra izahay, miaraka amin'ny fiaraha-miasa, Farany nahavita ny fametrahana tetikasa marobe izahay;
Tamin'ny taona 2020, nahavita nametraka izahay ary nanamboatra ny làlan'ny famokarana birao simenitra roa any India sy Kambodza, any Shina eo an-toerana dia nametraka sy nanamboatra 5 Sets bebe kokoa amin'ny tsipika famokarana birao simenitra amin'ny taona 2020;
India sy Kambodza fibra fanamboarana sambo simenitra dia samy natao hamokarana 5500PCS an'ny birao fanamoriana simenitra 1220X2440X6MM isan'andro, mitovy avokoa ny fitaovana rehetra, ny loko tokana no tsy mitovy, ny lokon'ny zava-maniry ao India, ny lokon'ny zavamaniry vita amin'ny loko fotsy;
Ireto sary manaraka ireto dia ho an'ny orinasa India sy Kambodia, afaka manavao eto raha hanondro anao!
Tonga tamin'ny Jona 2020 ny tsipika famokarana Kambodza; Ho an'ny tsipika famokarana India, Noho ny Covid-19, dia taraiky eo am-pametrahana izy io, nefa koa mihazakazaka amin'ny des 2020!
China Amulite Group no mitarika vondrona mpanamboatra masinina ho an'ny famokarana birao simenitra vita amin'ny simenitra, tsipika famokarana roofonta vita amin'ny simenitra, tsipika famokarana sandwich simenitra / valin-drihana, làlan'ny famokarana birao simenitra feno habaka, tsipika famokarana MGO, famokarana nolokoina nolokoina UV System Etc, traikefa 30taona ho an'ny milina rehetra mifandraika amin'ny vokatra simenitra simenitra!
Vondron'orinasa amulite shina dia vondrona mpanamboatra milina tompon'andraikitra sy mendri-pitokisana, maka laharam-pahamehana hatrany ny mpanjifanay, manandrana ny tsara indrindra izahay hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa rehetra mangataka amin'ny voalohany, tsy mivarotra milina fotsiny izahay, fa manome fampiofanana maimaim-poana ho an'ny mpanjifa koa avelao Ny mpanjifanay dia ho matihanina amin'ny indostrian'ny birao simenitra! Avelao hiaraka hiaraka amintsika ny mpanjifantsika!
Tongasoa ny mpanjifa eran'izao tontolo izao hitsidika ny Amulite ary hiady hevitra momba ny milina vokatra simenitra miaraka aminay! Serivisy ekipa matihanina indrindra ho anao 24 ora X 365Days!
Sary fanodinam-bokatra famokarana simenitra fibre India amin'ny taona 2020
Sary fanodinam-bokatra momba ny famokarana birao vita amin'ny simenitra Kambodza amin'ny taona 2020
Ampahany amin'ny sary fanodinana ny zotra famokarana simenitra eo an-toerana amin'ny taona 2020